Kulimale kabi abathathu kugetshengwa igalaji lakwa-Shell | News24
Kulimale kabi abathathu kugetshengwa igalaji lakwa-Shell
eGoli - Bekugcwele igazi phansi, umnyango wengilazi uphukile amazindi anezimbobo zenhlamvu, kubika i-IOL.
Lesi yisimo segalaji lakwaShell e-Eikenhof elihlaselwe yizigebengu ngoLwesithathu.
Kulesi sehlakalo, kulimale kabi abantu abathathu, kanti ngokusho komthombo ocele ukuba igama lakhe lingadalulwa, ubethi uzongena kuleli galaji ezofaka uphethiloli ngesikhathi ebona ukuthi kukhona okungahambi kahle.
“Bebengekho abantu abathela uphethiloli phandle futhi ngithe ngibheka ngabona ukuthi umnyango uphukile, ngiqale ngadideka kodwa konke kuvele kwacaca ngesikhathi kuqhuma isibhamu.
“Ngivele ngashayela ngasuka kule ndawo ngayoma ngale komgwaqo ngazama ukushayela amaphoyisa nonogada.
OLUNYE UDABA:Kuboshwe ababili ngomlilo oqubuke egalaji ku-N2
Ngibone abantu cishe abane bephuma ngalo mnyango bebaleka beyongena emotweni bayishaya yazula,”kusho lo mthombo.
Lo mthombo uthi ulinde kwaze kwafika amaphoyisa ngaphambi kokuba angene esitolo saleli galaji.
“Igazi beligcwele phansi, kubukeka sengathi abantu bebezihudula phansi bezama ukucasha. Omunye wesilisa ubelele opha kabi emlenzeni, kukhona nowesimame oshaya umshini naye obekhala futhi opha,”kuqhubeka lo mthombo.
Okhulumela amaphoyisa aseMondeor uKaputeni Nokulunga Dube usiqinisekisile lesi sigameko wathi akukaboshwa muntu.
“Kuthiwa abasolwa abane abebehlomile bagasele kuleli galaje bahlasela isisebenzi ebesisemshinini basiphoqa ukuba sivule umshini sibanike imali,”kusho yena.